Ngoku unokukhuphela ngaphezulu kweencwadi zobugcisa ezingama-250 kwiMyuziyam eyiGetty Virtual | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Fumana iincwadi zobugcisa zasimahla ezingama-250 kwiMyuziyam kaGetty
UManuel Ramirez | | Izibonelelo, Ezahlukeneyo
La uthungelwano lothungelwano luhlala lungowona mthombo ungaphelelanga wezixhobo ukuba uyakwazi ukukhangela. Ngokwenyani, eyona ngxaki inkulu ekufumaneni izibonelelo ezikumgangatho ophezulu kukwazi indlela yokufumana kunye nokulahla elinye inani elikhulu lekhonkco eliya kuthi likhokelele kumxholo ongalindelekanga ukuba usetyenziswe kwimisebenzi yewebhu okanye kulo msebenzi ngokwawo.
Imyuziyam kaGetty yenye yemithombo esinokuya kuyo xa sifuna ukufumana inkuthazo okanye umfanekiso oza kuwusebenzisa njengemvelaphi yewebhusayithi yokufota. Le myuziyam, ngaphandle kwamawaka emifanekiso eyenzayo nakubani na, ngoku wenze iincwadi zobugcisa ezingaphezu kwama-250 zafumaneka simahla.
Kwithala leencwadi lakho elibonakalayo, unokufumana ngaphezulu kweencwadi ezingama-250 ezibalaseleyo kwiikhathalogu, kunye nemibhalo kunye nokubhala ngesandla okuvela kwiZiko loGcino noPhando lukaGetty. Sithetha ngawe ngokufikelela kwizifundo zeCézzane ze-watercolor okanye ulondolozo lweendawo zakudala eMeditera.
Ke ukuba ungumthandi wobugcisa, eli thala leencwadi liyayixabisa ngalo lonke ubukhulu balo. Ngaphandle kokukwazi ukukhangela ngumbhali okanye amagama aphambili, uya kuba nethuba lokucofa kwiindidi ezahlukeneyo, ezinje ngobugcisa baseLatin American, imfundo okanye ukufota.
Iincwadi ziyafumaneka uzifunde zombini kwifomathi yePDF nakwiincwadi zikaGoogle. Enye yeenkcukacha zayo kukuba unokufikelela kwikopi ebonakalayo kwiWorldCat, iwebhusayithi ebonisa ukuba ngawaphi amathala eencwadi akufutshane nendawo okuyo apho unokufumana khona le ncwadi ubuyikhangela.
Unokufikelela kwithala labo leencwadi kweli qhagamshelo. Inye lithuba elihle lokufumana zonke iintlobo zeencwadi zobugcisa, Ngaphandle kokwazi amawaka emifanekiso abayenza ifumaneke nakubani na; njengamanye amaxesha siye sabelana ngale migca kunye nezinye iimyuziyam.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Fumana iincwadi zobugcisa zasimahla ezingama-250 kwiMyuziyam kaGetty
Iiyure ezili-160 ukudala le mbono ye-megapixel engama-600 yeManhattan "skyline"
Isixhobo esitsha esine-Photoshop CC sibona izinto ngonqakrazo olunye